Caalamka, 05 August 2018
Axad 5 August 2018
Iran oo diiday yabooha kulan ee Trump
Madaxa ciidamada ugu awoodda badan milatariga Iran ayaa diiday yabooha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah inuu wada hadal toos ah la yeesho hogaamiyayaasha Iran, isaga oo sheegay in Tehran aysan weligeed wada hadal la yeelan doonin waxa uu ugu yeeray “Sheydaanka Weyn”
Kaalinta Soomaalida Kanada ee Dalkaas oo Kor u Kacdey
Soomaalida Kanada ayaa ku soo badaneysa kaalimaha ay ka galayaan hogaaminta arrimaha dalkaasi
Taliban oo weeraray xarun haween
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxaha mintidiinta ay weerar ku qaadeen xarun haweenka lagu caawiyo.
Cayaaryahan hore oo ku guuleystay doorashadii Pakistan
Guddiga Doorashada Pakistan ayaa sheegay in cayaaryahankii hore ee isku beddelay siyaasaiga, Imran Khan, uu ku guuleystay doorashadii baarlamanka ee dalkaas ka dhacday, hase yeeshee xisbigiisa uusan helin codad ku filan si uu dowlad usoo dhiso.
Doorasho xasaasi ah oo ka dhaceysa Pakistan
Malaayiin qof oo reer Pakistan ah ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan dowlad kale oo rayid ah.
Toronto: Magaca ninkii weerarka fuliyey oo la shaaciyey
Mas’uuliyiinta dalka Canada ayaa magaca ninkii weerarka ka fuliyey magaalada Toronto habeenkii axadda ku sheegay Faysal Xuseen oo ahaa 29 deganaa magaalada, kaasi oo sidoo kale weerarka lagu dilay.
Booliska Canada ayaa sheegay in nin hubeysan uu Axadi 14 ruux ku toogtay magaalada Toronto, kuwaas oo laba ka mid ahi ay geeriyoodeen.
Cayaaraha Toronto: Kooxda Hilaac oo qaaday koobka
Waxaa Toronto xalay lagu soo gaba-gabeeyay cayaaraha toddobaadka Soomaalida. Kooxda kubbada cagta Hilaac FC ayaa koobka qaaday, kadib markii 4-0 ay cayaartii final-ka uga adkaatay kooxda Banaadir.